Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Kenya oo saakay lagu toogtay Magaalada Nairobi+ sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Kenya oo saakay lagu toogtay Magaalada Nairobi+ sawiro
Wararka ka imaanaya Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ayaa sheegay in saakay aroor hore wadada Uhuru ee Magaaladaasi lagu toogtay Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Dalka Kenya oo lagu magacaabo Kabete George Muchai .
Kooxo Hubeesan oo watay gaari ayaa ku horjaray Xildhibaanka gaariga uu watay waxa ayna xiligaa kadib ku fureen rasaas xoogan, waxaana gaariga Xildhibaanka saarnaa 2-kamid ah ilaaladiisa iyo darawalkii waday kuwaa oo dhamaan la dhintay Xildhibaanka.
Madaxa Booliiska ee Bartamaha Magaalada Nairobi Paul Wanjama, ayaa sheegay in dhacdadan ay dhacday saakay aroor hore , waxa uuna sheegay in rasaasta lagu furay gaariga Xildhibaanka ay ku geeriyoodeen Xildhibaanka iyo sadax qof oo kale oo la socotay.
Raga dilka geestay oon wali heebtooda la garan ayaa Goob jooge ka agdhawaa halka uu falkan ka dhacay waxa uu sheegay in raga weerarka geestay oo dhoor nin ahaa oo afka u duubnaa markii dilka ay geesteena goobta isaga baxsadeen.
Ciidamada amaanka Dalka Kenya oo soo gaaray goobta lagu dilay Xildhibaankan katirsan Baarlamaanka Dalka Kenya ayaa sameeyay baaritaano dheeraad ah ay ku raadinayaan ragii weerarka geestay , mana jiro wali war rasmi ah oo kasoo baxay laamaha amaanka Dalka Kenya.